आबुधाबीको मुसाफा हाम्रो लागि जेल बराबर छ | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
आबुधाबीको मुसाफा हाम्रो लागि जेल बराबर छ
बैशाख १०, २०७७ बुधबार १२:५६:५७ | मेरो कथा मेरो भोगाई
शंकर भुजेल, हाल, यूएई ।
म अहिले यूएईको अबुधाबी मुसाफामा मेटेक्स भन्ने कम्पनीमा काम गर्छु । म आएको ३ महिना भयो । यो तीन महिनामा कोरोनाको त्रास र कम्पनीले दिएको तनावबारे मसँग बयान गर्ने शब्द नै छैन । काममा नजाउँ भने बस्नै नदिने धम्की आउँछ, काममा जाउँ भने पिसाब गर्ने समेत फुर्सद हुन्न ।
मसहित मेरा कुनै पनि साथीहरु बिरामी भएर काममा नजाँदा एकछिनमा कम्पनीको मान्छे आएर जबर्जस्ती काममा लैजान्छ ।
काममा गएन भने कोठामा बस्न दिंदैनौं भनेर धम्की दिन्छ । काममा खास बे्रक समय पनि हुन्न । पिसाब गर्न जान समेत पाइँदैन ।
कम्पनीको नियम र खटन यस्तो छ कि हामीलाई लाग्छ कुनै जेलका हामी कैदी हौं । कमाउँला, जमाउँला भनेर घरपरिवार छाडेर आइयो, अहिले त जीवन नै कैदीको भन्दा खत्तम भयो ।
बस्ने ठाउँको पनि के कुरा । हजारौं मानिसहरु बस्छन् । कसैलाई ज्वरो आयो या कोरोनाको शंका लागेमा ढोका थुनेर छुट्टै राखिदिन्छन् । न दबाई, न डाक्टर न कसैको वास्ता । बिरामी कसरी निको हुनु । भन्न त सबैलाई समान व्यवहार भनिएको छ ।
तर यहाँको सरकारले श्रमिकलाई त्यति वास्ता गरेको छैन । कम्पनीलाई पनि बस काम लगाउँ भन्ने मात्र छ ।
यो बेला कुनै अरु कारणले ज्यान गयो भने पनि कोरोना हो भनेर पन्छिने अवस्था छ । कम्पनीमा न पङ्खा, न एसी । खाडीको गर्मी कसरी खेप्नु ?
यहाँको गर्मी सुन्नेले कल्पना गर्न सक्दैन । भोग्नेलाई थाहा छ । यहाँ हामीलाई लिंक नेशनल ओभरसिजले पठाएको हो । यो बेला म्यानपावरले केही पहल गरिदिए त हामीलाई अलि सहज हुन्थ्यो कि । यो कुरा दूतावासमा पनि कतिपटक राख्यौं, तर सुनुवाई भएन । कसलाई भन्ने थाहा छैन । हाम्रो दुःख कसले सुन्छन् पनि थाहा छैन।
त्यसैले मैले आफ्नो कुरा उज्यालोमार्फत राखेको हुँ । म सबैलाई भन्न चाहन्छु सोचेजस्तो हुँदैन विदेश । देखेजस्तो रमाइलो पनि हुँदैन विदेश । जहाँ जानुहुन्छ, हजार पल्ट सोचेर मात्र पाइला चाल्नुहोस् ।
खाडी र मलेसियामा बुधबारकाे काेराेना अपडेट : सङ्क्रमित नेपालीको सङ्ख्या ८९, ६ निको भए, ८३ जना अस्पतालमा
April 22, 2020, 11:30 p.m.
हामीहरुको पनि यस्तै छ कहानी ...हामीलाई पनि काम नभएर कम्पनीले न रुम दिएको छ , न त खाना नै / हामी कसरी बाँच्ने होला यहाँ ?? कम्तिमा तपाइँलाई कम्पनीले काम त दिएको छ अनि बस्न पनि दिएको छ /
April 22, 2020, 1:18 p.m.
काम गर्न भनेर आयपछी त गर्नु पर्छ नेपाल को जस्तो5कप को चिया खायर लाख को कुरा यहाँ चल्दैन मैले बुजेर देखे अनुसार नेपाली प्राय साथी हरुलाइ दारु अनि अनावश्यक मा यता उता घुम्न नपायार जेल जस्तो भाको हो अरु केही हैन म आयाको 11 बर्स हुन लाग्यो मलाई आफुले काम गरेको कम्पनी आफ्नै देश अनि घर मा काम गरेजस्तो हुन्छ समग्र मा हेर्ने हो भने यहाँ को नीति नियम कानुन अनुसासन मा बस्ने हो भने गल्फ मा युयइ बिश्व को यक बेस्ट मा पर्ने देश हो लखर लखर गर्ने नेता यहाँ हुन पाइदैन